सेक्स र्‍याकेट चलाउँदै गर्दा नायिका पाँचतारे होटलबाट पक्राउ बिग बोस प्रतियोगी अरहान खानकी पूर्वप्रेमिका अमृता धनोजा एक पटक फेरि चर्चामा आएकी छन् । मुम्बई प्रहरीले अमृतालाई गारेगाउँको एक होटलबाट पक्राउ गरेको छ यस्तो पनि२५ पुस २०७६
आठ हजारको खाना खाएर वेटरलाई २ लाख २४ हजार टिप्स ! हलिउडका चर्चित गायक तथा नायक डानी वालबर्गले नयाँ वर्ष यसरी मनाए कि उनको यतिबेला सबैले तारिफ गरिरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय . यस्तो पनि२० पुस २०७६
पहिलो हाफमा ८ गोल खाएको टिम दोस्रो हाफमा मैदानमै नआएपछि... इंग्ल्याण्डको स्थानीय हेलेनिक फुटबल लिग अन्तर्गत शनिबारराति भएको एबिङ्गडन डर्बीमा एउटा टिमले पहिलो हाफमा नै ८–० ले पछि परेपछि दोस्रो हाफ खेल्न मानेन खेलकुद . यस्तो पनि१३ पुस २०७६
डाक्टरलाई किन 'भूत विद्या' सिकाउँदै छ भारत ? भारतको एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा ‘भूत देखेको वा भूतको वशमा’ परेको बताउने बिरामीको उपचार गर्ने विधि सिकाउ प्रमाणपत्र तहको पाठ्याक्रम तयार पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय . यस्तो पनि११ पुस २०७६
के हो शाकाहारी कण्डम ? सन् २०१५ मा फिलिप सिफर र वाल्डेमर जाइलर आफ्नो नयाँ कारोबारका लागि पैसा जम्मा गर्दै थिए । सिफर भन्छन्, ‘पैसा सहयोग दिनेहरूले सोध्ने गर्दथे–के कण्डम शाकाहारी हो ?’ अन्तर्राष्ट्रिय . यस्तो पनि८ पुस २०७६
बेबी डल बन्ने चाहनामा एक युवतीले लगाइन् १७ एसिड इन्जेक्सन एन्ड्रिया दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो ओठ भएकी युवतीको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहन्छिन् । यसका लागि उनी जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार छिन् यस्तो पनि . समाचार८ पुस २०७६
पतिका सहयोगीसँग २० वर्ष प्रेम, वृद्धाश्रममा पुगेर विवाह ! केरलाको वृद्धाश्रममा हुन लागेको यो अनौठाे विवाहमा ६६ वर्षका दुलाहा र ६५ वर्षका दुलही हुनेछन् अन्तर्राष्ट्रिय . यस्तो पनि६ पुस २०७६
मर्‍याे कीर्तिमानी भेडा अत्यधिक तौल भएका कारण क्रिसको ज्यानमा खतरा देखिएको थियो । पछि सबै ऊन निकालियो । त्यही ऊन तौल गर्दा सबैभन्दा धेरै ऊन दिने भेडाको रेकर्ड दर्ता भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय . यस्तो पनि . समाचार४ पुस २०७६
चाबीले बताउँछ तपाईंको व्यक्तित्व : जाँची हेर्ने कि ? यदि तपाईंले यस चाबीलाई नजिकबाट हेर्नुभयो भने यस चाबीमा निकै अनौठो र भिन्न डिजाइन छ । तपाईंलाई यो चाबी मनपरेमा यको अर्थ यो हो कि तपाईं आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ र मानिसलाई तपाईंको कुरा मनपर्दैन भने पनि त्यसको तपाईंलाई कुनै परवाह हुँदैन यस्तो पनि२ पुस २०७६
पादबाट निस्कन्छ घातक ग्यास, यसको प्रभावले ६ मिटर टाढाको मच्छर पनि मर्छ ! यी व्यक्तिले दाबी गरेका छन् कि उनको पेटमा एक विषालु ग्यास बन्छ । यो ग्यास यति विषालु छ कि त्यसको आसपास रहेका सारा मच्छरसमेत मर्छन् यस्तो पनि . समाचार२ पुस २०७६
हाकिमप्रति घृणा छ ? सावधान ! हृदयाघात हुन सक्छ तपाईंले वास्तै नगरेको अर्को कारण पनि पत्ता लगाएका छन् वैज्ञानिकहरूले । उनीहरू भन्छन्, ‘तपाईं आफ्नो हाकिमलाई थेरै घृणा गर्नुहुन्छ भने पनि हृदयाघातको जोखिम हुन्छ यस्तो पनि . समाचार१ पुस २०७६
बेहुली लिन जन्ती लिएर जाँदा चार लाख जरिमाना तिरेर फर्किए बेहुला ! जन्ती लिएर बेहुली लिन पुगेका बेला उल्टो जरिमाना तिरेर फर्किनुपरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । झापामा बेहुली लिन गएका बेहुलाले सिन्दुर हाल्ने बेलामा हात नउठेपछि ४ लाख जरिमाना तिरेर फर्किनुपरेको हो यस्तो पनि . समाचार१ पुस २०७६
वासिङ मेसिनभित्र बच्चालाई देखेपछि... नजर मेसिनमा पर्नासाथ बच्चा मेसिनभित्र देखेपछि उनी बेहोस भए । उनलाई होस आएपछि मात्र थाहा भयो कि उनले बच्चाको कपडामा बच्चाको फेस प्रिन्ट गरेका थिए यस्तो पनि३० मंसिर २०७६
न्याय माग्दै गाईतर्फबाट अदालतमा मुद्दा यहाँका यत्रतत्र घुमिरहेका छाडा पशुचौपायको तर्फबाट न्यायको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ यस्तो पनि . समाचार२६ मंसिर २०७६
सिरियल किलरः जो पुरुषलाई घर बोलाएर पहिर्‍याउँथिन् महिलाका कपडा, नमानेपछि यस्तो गर्थिन्... यदी आफूहरू विवाह नगराए ती महिलाको हत्या गर्ने र आफू पनि आत्महत्या गर्ने धम्की दिएकी हुन् अन्तर्राष्ट्रिय . यस्तो पनि . समाचार२६ मंसिर २०७६
जुन पण्डितले बिहे गराए, उसैसँग भागिन् दुलही स्थानीयका अनुसार युवतीको विवाह स्थानीय एक युवकका साथ भएको थियो । जन्ती आउँदा गाउँका विनोद महाराज नामका पण्डितले दुवैको विवाह गराए । विवाहपछि दुलहीलाई बिदाइ गरे, केटाको घर पठाइयो समाज . अन्तर्राष्ट्रिय . यस्तो पनि . समाचार२५ मंसिर २०७६
विदेशमा रहेका चन्द्रागिरीबासीको लगत संकलन
समय तालिकाअनुसार सबै व्यवसाय खुलाउन माग
रोल्पामा चट्याङ लागेर २ जनाको मृत्यु
दैलेखमा क्वारेन्टाइनमै युवकको मृत्यु
डडेल्धुरा र बैतडीका २ सय ३५ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ